IPolo Vivo Sound Edition iqhakambisa umculo
INTATHELI YEZEZIMOTO | August 30, 2019
KUNENGOMA kaDJ Heavy K ethi Mculo ayenze ngokubambisana neNdlovukazi.
Kuyona kunezinhlamvu ezithi “lingaba yini izwe ngaphandle kwakho mculo”. Umculo udlala indima enkulu empilweni yabantu nokuyinto abayigubhayo kwaVolkswagen ngokwethula iPolo Vivo Sound Edition. Le Vivo ayigcini nje kuphela ngokuqhakambisa uthando lomculo kodwa ngeyokugubha futhi nempumelelo yayo le moto.
Njengoba kuqala inyanga entsha nje, ukudayiswa kwayo kuyaqala ngemuva kokuthi ibonakale embukisweni iVIVOnation Music Festival ngo-Ephreli nonyaka.
Selokhu kuqale unyaka, sekudayiswe amaPolo Vivo angu-17 672 kuya kuulayi.
“Sinethemba lokuthi ukwengezwa komsindo oseqophelweni eliphezulu kwiPolo Vivo kuzoheha kubathengi abasha abafuna umsindo osezingeni uma bedlala umculo,” kusho uMartina Beine oyiNhloko yezokuDayisa nokuMaketha kwaVolkswagen.
IVivo Sound Edition yakhelwe phezu kwesisekelo se-1.4 Comfortline. Inamandla angu-63 kW kanti isebenzisa ugearbox oshintshwayo. Izinto efika nazo kubalwa amariu angu-16 inch Rivazza alloy wheels, R340G Radio with App-Connect, izipikha ziyisithupha nesubwoofer, amakhava ezibuko asawolintshi kanjalo nasezansi emaceleni nangemuva. Imibala yayo ngaphandle ihlukene kathathu okungoPure White, Limestone Grey noReef Blue.
Ngaphakathi wengeza uR2 500 ukuze ibe mnyama bese iba nesiteringi sesikhumba, igiya nakwihandbrake nokunye.
Ifika newarranty yeminyaka emithathu noma * -120 000km, anti-corrosion warranty yeminyaka eyisithupha. IMaintenance Plan neService Plan ukufaka uma uthanda. Kumele iye kwisevisi ngemuva kokuhamba * -15 000 km.